Goldcrest Post ကိုရဲ့ရိုင်ယန်စျေး "သူမရဲ့အနံ့" တွင်ကိုယ်ပိုင်အဗဒ္ဒုန်၏အသံဖန်တီးလိုက်တဲ့ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Goldcrest Post ကိုရဲ့ရိုင်ယန်စျေး "သူမရဲ့အနံ့" တွင်ကိုယ်ပိုင်အဗဒ္ဒုန်၏အသံဖန်တီးလိုက်တဲ့
Goldcrest Post ကိုရဲ့ရိုင်ယန်စျေး "သူမရဲ့အနံ့" တွင်ကိုယ်ပိုင်အဗဒ္ဒုန်၏အသံဖန်တီးလိုက်တဲ့
ဝါရင့်သံကိုဒီဇိုင်နာနှင့်ပြန်လည်မှတ်တမ်းတင်ရောနှောဧလိရှဗမော့စ်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးနေတာတွေလည်းပန့်ခ် rocker ၏အစွမ်းထက်ဒရာမာနှင့်အတူဒါရိုက်တာအဲလက်စ် Ross ကပယ်ရီနဲ့သူ့ရဲ့ပူးပေါင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
အဘို့အ NEW YORK CITY- အသံထုတ်လုပ်မှု သူမ၏အနံ့¸ကီတစ်ခုခု (ဧလိရှဗမော့စ်) အမည်ရှိ Self-ဖျက်ဆီးပန့်ခ် rocker အကြောင်းကိုစာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာအဲလက်စ်ရော့စ် Perry ရဲ့အသစ်ကရုပ်ရှင်, New York မှာ Goldcrest Post ကိုမှာပြီးစီးခဲ့ခဲ့သည်။ ရိုင်ယန်အမ်စျေးနှုန်းတစ်ခု Indie အသံဖမ်းစတူဒီယိုနှင့်ဖျက်ဆီးဖို့ကီရဲ့လမ်းတလျှောက်တွင်အခြားအမှတ်, အသံကအယ်ဒီတာကြီးကြပ်သံကိုဒီဇိုင်နာနှင့်စီမံကိန်းအပေါ် re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှော, အသက်ရှင်ခြင်းကိုတစ်ဦးလက်ဆော့ရော့ခ်ကလပ်ဖြစ်စေသောသူဌေးများနှင့်ပျော့ပြောင်းတေးသံပို့ဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ... နှင့် နောက်ဆုံးရွေးနှုတ်။
ယင်း၏ရော့ခ်ဎလိပ်ဘာသာရပ်ပေးထားသောကြောင့်အသံကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး သူမ၏အနံ့။ Perry ရဲ့ယခင်ရုပ်ရှင်သုံးခုပေါ်တွင်အသံအဖွဲ့များခေါင်းနှစ်လုံးသူကိုစျေး, (Phillip Up ကိုနားထောငျပါ, ကမ္ဘာမြေ၏ဘုရင်မ နှင့် ရွှေထွက်ပေါက်), ဒါရိုက်တာထုတ်လုပ်မှုစတင်မီကပင်သူ့ကို script ကိုတစ်ဦးမိတ္တူစေလွှတ်တော်မူသောကပြောပါတယ်။ "ကျွန်မဒီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရိုင်ယန်ကတိထားတော်က 'Big One,' 'ပယ်ရီကပြောပါတယ်။ "ငါသည်စိတျကူးအသံကျယ်အများစုအနုစိတ်သောအသံဒီဇိုင်းကိုမှကိုယ်နှိုက်ကထုတ်ချေးမယ့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးချင်တယ်။ "
အဆိုပါရုပ်ရှင်စွဲနှင့်စင်ကြယ်သောအရဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သူမ၏ဟောင်းတဦးအနုပညာအစွန်းပြန်လည်သူမ၏ရုန်းကန်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြမ်းတမ်းအပြုအမူသို့ကီရဲ့နွယ်ဖွား၏ကို arc ခြေရာကောက်ငါး discrete လုပ်ရပ်များထွက်ပါဝင်သည်။ ယင်း၏ရှည်ဖွင့်ပွဲမြင်ကွင်းမှာတော့ကင်မရာကီနှင့်သူမ၏အဖွဲ့ကဖွင့်ပြီးနောက်တစ်ကွင်း၏ကျဉ်းကျုတ်, cacophonous ပါသေးတယ် roams စုတခုပြီးဆုံးပါပြီ။
အခင်းဖြစ်ပွားရာဘို့အသံကဒီဇိုင်းအတွက်, စျေးနှုန်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကီရဲ့ဖရိုဖရဲကမ္ဘာနှင့်အဖျားစိတျထဲမှာပရိသတ်ကိုဗတ္တိဇံဖို့ဖြစ်တယ်။ "ကျနော်တို့နေတဲ့ပြပွဲပြီးနောက်ပါသေးတယ်နေနှင့်လူစည်ကားခြင်းနှင့်ဆူညံရဲ့" ဟုသူကမှတ်ချက်ချတယ်။ "ကျနော်တို့ကစင်္ကြံ, greenrooms အတွက်တိုက်ခိုက်နေလူတွေအတွက်ပစ္စည်းပစ္စယကျဆင်းနေတင်, လူတွေရတဲ့ထရပ်ကားရှိသည်။ ဒါဟာပြင်းထန်သောပါပဲ။ "သူကပယ်ရီအားလုံးအသံသက်ရောက်မှုခြစ်ရာကနေဖန်တီးအခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ blended ခံရဖို့ခဲ့ဆိုလိုသော soundstage ပေါ်တွင်တစ်ဦးထုံးစံ-built အစုံပေါ်မြင်ကွင်းတစ်ခုပစ်ခတ်ကြောင်းထပ်ပြောသည်။
ထိုအရပ်မှ, ဇာတ်လမ်းရုတ်တရက်ကီသူမ၏ bandmates နဲ့ရုပ်ဆိုးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုရှိပြီးလူငယ်တစ်ဦး, ထ-and လာမယ့်တီးဝိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံရာအသံဖမ်းစတူဒီယိုဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ လေထုတင်းမာနေသည်နှင့်ကြိမ်ဒါတိတ်ဆိတ်မှာ, သင်က pin ကိုတစ်စက်ကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ "ဘယ်မှာအက်ဥပဒေတစ်ခုမှာအတွက်အသံဒီဇိုင်းကြီးတွေဖြစ်၏ အက်ဥပဒေနှစ်ဦးအတွက်ကြောင့်ထိတွေ့နိုင်သောနှင့်မသိမသာကွဲပြားနေပါတယ် "စျေးကပြန်ပြောပြသည်။ "ဒါဟာတိတ်ဆိတ်င်; ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုတစ်အသံဖမ်းစတူဒီယို၏ hermetically-တံဆိပ်ခတ်အာကာသဗတ္တိဇံချင်တယ်။ တံခါးပေါက်ထူးခြားတဲ့အသံရှိသည်။ သငျသညျတိုင်းခွရောနှင့် button ကိုတွန်းအားပေးစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ ကျနော်တို့ဧလိရှဗမော့စ်နှင့်အခြားသရုပ်ဆောင်တွေ၏ဖျော်ဖြေပွဲ punctuate ငှါ၎င်း, တင်းမာမှုမောင်းထုတ်ရန်သူတွေကိုကန့်သတ်အသံကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ "
အဆိုပါရောင်လေထုအက်ဥပဒေသုံးခုအတွက်၎င်း၏မြည်ဟီးရိုက်ခတ်ရောက်ရှိ။ အဆိုပါတီးဝိုင်းကီကိုပြသသွားလျှင်အံ့သြစင်ပေါ်မှာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစွာသွားကြဖို့ပြင်ဆင်နေပြန်မယ့်ကလပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရောက်လာပါဘူးတဲ့အခါသူလုံးဝသံလမ်းချွတ်သွားပြီနှင့်မျက်မှောက်၌လူတိုင်းမှာသူမ၏ဒေါသကြံစည်ပါတယ်။ ဒါဟာရုပ်ရှင်များတွင်အများဆုံးသောအသံ-intensive အချက်ပါပဲ။ "ဒီ soundscape ဒီမြင်ကွင်းအတွက်ကြီးမားသောဖြစ်ပါတယ်" ဟုစျေးကပြောပါတယ်။ "လူတိုင်းဖန်တီးမှုရမှတ်ထဲကနေကင်မရာကိုအလုပ်ကိုတည်းဖြတ်ဖို့, သူတို့ရဲ့ဂိမ်းရဲ့ထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသံကိုဒီဇိုင်းကလပ်သည်မည်မျှစုစုပေါင်းညွှန်ပြဖို့ကထိပ်ပေါ်မှာကြောင့်အားလုံးထောက်ပံ့နေသည်။ သငျသညျအပေါ်ထပ်ကနေခြေရာကိုနား ထောင်. , မြို့ရိုးမှတဆင့်အော်ဟစ်လူတွေက။ "
ထိန်းချုပ်မှုထဲကကီကတော့ Schmidt ရဲ့အဖြစ်, အသံဒီဇိုင်းစိတ္တဇသို့အတိတ်လက်တွေ့ကျကျကိုယ်စားပြုမှုလှုံ့ဆော်ပေး။ "အဲလက်စ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်တိုက်ရှိရဲ့နဲ့တူပါကတစ်ဦးချေမှုန်းရေးနဲ့တူခံစားမိချင်ခဲ့တယ်," စျေးကပြောပါတယ်။ "ငါသည်ဤမျှဝေးသွားသေနတ်သံတွေနှင့်ဗုံးများထည့်သွင်းရန်အဖြစ်သွားလေ၏။ သူတို့ကကိုဆောက်နှင့်သင်ကဲ့သို့သောသူတို့အားအသိအမှတ်မပြုကြဘူးဒါပေမယ့်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါကွဲပြားခြားနားပုံရသည်။ အဲလက်စ်ကနေနောက်ထပ်မှတ်ချက်နတ်ဆိုးများနံရံများတွင်ရှိပါတယ်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမရှိကပြောသည်။ ငါခံစား oatmeal ဆူခံခဲ့ရ get ဖို့အသုံးပြုအများအပြားဒြပ်စင်တစ်ခုမှာ, ဆနျ့ကဆင်းခန်းချကြ၏။ ဒါဟာ ebbs နှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုမှတဆင့်စီးဆင်း။ "
စျေးနှုန်းအဘို့, အခင်းဖြစ်ပွားရာ၏ရူးသွပ်မှုက၎င်း၏ idiosyncratic အသေးစိတ်ကိုတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။ "မျက်နှာကျက်နဲ့ရေတစ်ယိုစိမ့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပုံးတစ်ပုံးသို့ရွှဲနေသည်ရှိတယ်" ဟုသူကမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ဒီရေပုံးအခင်းဖြစ်ပွားရာ၏အစမှာအနီးကပ်တက်၌တည်ကြောင့်မြေတပြင်လုံးလုပ်ရပ်မှတဆင့် subliminally ရွှဲဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသံကျယ်တကယ်ကျိုးမယ့်တစ်ဦးရေခဲသေတ္တာ, နှင့်အခန်း၏ထောင့်တွင်ငြိမ်ကစားမယ့်တီဗီလည်းရှိပါတယ်။ တောင်မှမီးတစ်ကျောချမ်းဖွယ် hum ထုတ်လွှတ်မှု။ ဤအ element တွေအားလုံး aural အာကာသ၏ပထဝီထိန်းသိမ်းခြင်း, ကင်မရာနှင့်အတူရွှေ့။ "
ရုပ်ရှင်ရဲ့စတုတ္ထလုပ်ရပ်မှာ, တစ်နှစ်အကြာတွင်င်နှင့်ကီကျေးလက်ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်အတွက်သူမ၏နေအိမ်၌တည်ရှိ၏။ သူမသည်သမ္မာသတိရှိကြလော့ပြန်လမ်းကြောင်းအပေါ်သူမ၏ဘဝကိုရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကိုယ်ကသာအနည်းငယ်မျှသာသံကိုသက်ရောက်မှုယခင်မြင်ကွင်းတစ်ခုမှကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးမတူဘဲကျဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်ဂီတကိုအလေးအနက် ပြု. အတူစျေးမှတ်ချက်ပြု, ရုပ်ရှင်၏ဆိတ်ငြိမ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နိဂုံးလုပ်ရပ်မှာတေးသံတစ်ဝေးအချို့တစ်ကျော့ပြန်ထံမှဆီသို့ကီအင်အားကြီးအဖြစ်ကိုတဖန်ရေနွေးငွေ့ကိုယူလိုက်တယ်။
အချောတေးသံ Goldcrest မှာဇာတ်စင်ပေါ်တွင်စျေးနှုန်းအားဖြင့်ရောစပ်ခဲ့သည်။ ပယ်ရီအစည်းအဝေးများအများစုအဘို့၌ထိုင်တော်မူ၏။ "ကျနော်တို့ကအဲလက်စ်၏ရူပါရုံအောင်မြင်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့" စျေးကပြောပါတယ်။ "ဤမျှလောက်သွားအတူ, သူကဂီတ, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့အသံကဒီဇိုင်း၏ညာဘက်ချိန်ခွင်လျှာအောင်မြင်ရန်စောင့်ရှောက်မှုတွေအများကြီးခေါ်သွားတယ်။ အဆုံး၌, ငါတို့တခြားလူတိုင်းရုပ်ရှင်မှယူဆောင်နှင့်ပုံပြင်ကိုပြောသည်ခံရသောမှုကြီးကိုထောကျပံ့ဖို့သံကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ သင့်အနေဖြင့်အလင်းအိမ်လူအစုအဝေးအပေါ်ထပ်သူတို့ခြေနေမှုကိုချေဖျက်သည်စစ်ဆင်ရေးပဲအခန်းအပြင်ဘက်အပေါ်သွား sizzling နားထောင်ကြလော့။ ဒါဟာအားလုံးရှိပါတယ်။ "
ပယ်ရီပြင်းထန်သောပေမယ့်ကြိုးအဖြစ်ရောနှောဖော်ပြခဲ့သည်။ "ရိုင်ယန်နှင့်အတူအကြှနျုပျ၏ကတခြားရောသမမွှေများငါးရက် ဖြစ်. , ဒီ 12 ကြာ "ဟုသူကပြောပါတယ်။ "တချို့ညနီးစပ်သူသို့မဟုတ်အတိတ်သန်းခေါင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဖိုင်တွေကိုကျနော်တို့က၎င်း၏ကန့်သတ်နိုင်ဖို့စနစ်တွန်းနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော့်ရလဒ်တွေအိပ်မက်ကျော်လွန်ပြီးတိုင်းအသေးစိတ်ပြည့်စုံသောကြောင့်ကြီးမားကြတယ်။ "
Goldcrest Post ကို features တွေရုပ်ရှင်တွေ, Episode ရုပ်မြင်သံကြား, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်အခြားစီမံကိန်းများအတွက်တကိုရပ်တန့်ဖန်တီးမှုဖြေရှင်းချက်ပေး, တစ်ဦးဦးဆောင်လွတ်လပ်သော Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေနယူးယောက်မြို့ရဲ့အနောက်ကျေးရွာတွင်တည်ရှိသည်, ကုမ္ပဏီအပေါ်-set ကိုနေ့စဉ်သတင်းစာများ, ရုပ်ပုံပြီး, အသံတည်းဖြတ်, ADR နှင့်ရောစပ်နှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုများ, အယ်ဒီတာအဖွဲ့ရုံးများပေးပါသည်။ မကြာသေးမှီကခရက်ဒစ်များပါဝင်သည် ရုရှား Doll, အမြင့်ပျံငှက်, သူမ၏အနံ့; မင်းကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလို့တောင်းပန်ပါတယ်; ဘီလီယံ; Unsane; ကင်မရွန် Post ကို၏ Miseducation; Juliet, အဝတ်အချည်းစည်းများနှင့် Madeline ရဲ့ Madeline ။
NAB နယူးယောက်တွင်စကားပြောရန်ရိုးရှင်းခြင်းနှင့် (၎င်းသည်“ ပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်မြင်သောအချက်”) နှင့်ကွဲပြားသောအရာ - အောက်တိုဘာလ 9, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - အသံက လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-06-13
နောက်တစ်ခု: ဇွန်လအစည်းအဝေးတွင် immersive VR ၏အနာဂတ် Explore မှ SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ